केदारभक्त माथेमा - नेपाल
केदारभक्त माथेमाका लेखहरु
हामी अहिले जे छौँ, आफू र विश्वलाई जसरी हेर्छौं या छिमेकीसँग हाम्रो परस्पर व्यवहार जस्तो छ, यी सबैमा इतिहासले ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, 'विगत मरिसकेको छैन, यो त अहिले पनि जीवित छ ।'
केदारभक्त माथेमा, फाल्गुन २८, २०७५
विवेकीकरणलाई बाल्यकालमै सुरु नगर्ने हो भने असल नागरिक कसरी तयार हुन्छ ? असल नागरिकबिना बेथितिमाथि कसले प्रश्न उठाउँछ ? भनिन्छ- सबैभन्दा चुत्थो ज्ञान घोकन्ते विद्या हो ।
केदारभक्त माथेमा, फाल्गुन १२, २०७५